HALKAAN KA AKHRISO WAA WARARKA WARGEYSKA MOGADISHU TIMES DAILY NEWS PAPER EE MAANTA OO AH ARBACO 17-KA LUULYO 2019-KA
Wednesday July 17, 2019 - 10:04:03 in Wararka by Mogadishu Times
CAWAD OO WEERAR CULUS KU QAADAY SOMALILAND Axmed Ciise Cawad, Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya ayaa shalay markale ka hadlay talaabada DF Somalia xirii rka u gu jartay dalka Gini ee galbeedka Afrika. Wasiir Cawad ayaa sheeg ay in wadda
CAWAD OO WEERAR CULUS KU QAADAY SOMALILAND Axmed Ciise Cawad, Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya ayaa shalay markale ka hadlay talaabada DF Somalia xirii rka u gu jartay dalka Gini ee galbeedka Afrika. Wasiir Cawad ayaa sheeg ay in waddanka Gini ay roog cas u dhigtay hogaamiye sheeganaya inuu ka go'ay Soomaaliya oo dalka kala qeybinay a, isla markaana xusay inaysan talaabada Gini marnaba waafaqsaneyn xiriirka caal amiga.
Wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu ka dhawaajiyey in DFS marnaba aqbaleyn in la kala qeybiyo midnimada Umadda Soma liyeed, isagoona digniin u direy wadamo kale oo uu sheegay inay gacan ku leeyih iin howlaha lidiga ku ah midnimada Somal iya.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaali ya, Axmed Ciise Cawad oo arrimahaasi ka hadlayana wuxuu yiri "Gini waxay martiqa ad sida madaxda ah u samaysay hoggaa miye ku andacoonaya in uu Soomaaliya ka goosanayo oo dalka kala qaybinayo ma na aha mid waafaqsan xidhiidhka caalami ga ah iyo qaraarrada ururada anaga iyo Gi ni-ba aanu ka midka nahay sida, UN-ka, ururka Iskaashiga Islaamka, ururka Afrika anka”.
"Markaa waxaan u malaynaya Gini wa xay u nuglaatay Pressure (cadaadis) dal-kale uga yimid iyada oo og in aanay arrin tani haboonayn ayay xadgudub sameeye en, marka anaguna waxaanu dooranay in aanu u sheegno oo nidhaahno ‘idinkama yeelayno in aad qarannimadayada meel kaga dhacdaan oo qawaaniintii la isku yaq aanay ku xadgudubtaan oo horseedaan khatar midnimada umaddayada soo waj ahda iyo waliba in uu arrinkoodu dib u dh igi karo Soomaalidii oo doonaysa in ay wada-hadasho”.
Wuxuuna intaas kusii daray "Haddii ko ox kasta oo tidhaa ‘waanu goosanayna’ uu dal u soo dhaweeyo sidii ay dawlad yihiin waxay dib u dhigaysa in dadka Soomaal ida ah wada-hadlaan, marka qofku ma hel ayo wax ku dhiiri gelinaya in uu Soomaa liya la hadlo haddii ay dawladuhu isaga dhigayaan red carpet (roogga cas), marka digniin aanu u diraynay bay ahayd dalkaas iyo dalalka kale ee laga yaabo in arrintaas gacan ku leeyihiin”.
DOWLADDA SOOMAALIYA OO LA WAREEGTAY AMNIGA M/ DHUUSAMAREEB
Dowladda Soomaaliya ayaa ku dhawa aqday in ay guud ahaan la wareeg tay Am niga M/Dhuusama reeb ee Caasimadda maamulka Galmudug, islamarkaana laga wareejiyay maamulka Ahlusunna oo horay gacanta ku hayay.
Dowladda Soomaaliya ayaa si rasmi ah ula wareegtay Amniga Dhuusamareeb, iya doo R/wasaaraha XFS uu kormeer dhiiri-galin ah ugu tagey Ciidanka sugaya Amn iga oo ah Ciidankii Booliska & NISA ee hor ay uga howlgali jiray Galmudug iyo kuwii Ahlu Sunna ee dhawaan la qarameeyey ee ku kala biiray Booliska iyo NISA. Cii dankaan ayaa la sheegay in ay qeyb ka yi hiin Ciidanka suggi doonta Amniga doora shadda maamulka Galmudu g, islam arkaana hadda ka dib dowladda Soomaal iya ay gacanta ku heyneyso gu ud ahaan Ammaanka Caas imada Galmudug.
Ciidanka Ammaanka Ma gaalada la waree gay ayaa qaarkood ka soo guureen Magaaladda Cadaado oo ay horay uga
ISMAAMULKA AMXAARADA OO MADAXWEY NE LOOGA DHIGAY QOF KU DHOW RW ABIY
Madaxweynaha Ismaamulka gobolka Amxaarada ayaa loo magacaabay, Temes gen Tiruneh oo ah nin ku dhow ra’iisul was aaraha Itoobiya, kalana talin jiray arrimaha amniga. Xubnaha xisbiga Dimoqraadiga A mxaarada ayaa muddo saddex maalmood shir uga socda magaalada Bahar Dar, wax aa ay u xusheen gobolka inuu hoggaami yo Temesgen Tiruneh.
Magacaabistan, waxaa ay ka dambey say kaddib markii la dilay madaxweynihii gobolka Amxaarada Ambachew Mekonn en.Tobaneeyo ruux ayaa ku geeriyooday dagaallo ka dhashay isku day afgambi dhicisoobay oo ka dhacay gobolka Amxaara da, taasoo sababtay in lagu dilo Madaxweynihii Ismaam ulka Amxaarada Ambachew Mekonnen. Taliyihii Guud ee Ciidamada Itoobiya ayaa isna lagu dilay Addis Ababa, iyadoo dil kiisa lala xiriiriyay inuu qeyb ka ahaa isku daygii afgambi ee ka dhacay Gobolka Amxaarada.
Gobolka Amxaarada oo dhaca Waqooyi Galbeed dalka Itoobiya ayaa ah qowmiya da 2aad ee ugu badan Itoobiya, waxaana loo arkaa gobol miisaan siyaasadeed oo weyn ku leh dalka Itoobiya.
MIDOWGA YURUB OO XOOJINAYO TAAGEER ADA SOOMAALIYA
Howlgalka Midowga Yurub ee Soomaal iya ayaa shaaciyey in ay ka go’an tahay sare u qaadidada taageerada DFS War qoraal ah ayuu Ururku ku sheegay inay xo ojinayaan taageerada ay xukuum adda federaalka ka siiyaan dhanka dimo qraad iyada iyo horumarinta dadka.
Sidoo kale wuxuu shaaca ka qaaday in dowlada federaalka uu ka caawin doono dhismaha hay’addaha dowladda iyo xooj inta cadaaladda.
Bayaanka ayaa lagu xusay in taburac aad ooda ay sidoo kale ku qotonto sidii Soomaaliya u noqon lahayd dal xasiloon.
Ugu dambeyntii War-saxaafadeedkan ayaa Tacsi loogu dir ay Ehellada ay dadko odu ku dhinteen weerarkii ka dhacay M/Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose.
WASIIRKA TAMARTA OO QAABISHAY MADAX KA SOCOTAY IOM IYO IGAD
Wasiirka Tamarta iyo Kheyraadka Biya ha ee XFS Marwo; Fowzia Maxamed Sh, ayaaXafiiskeeda ku qaabbishay Wafdi ka socda hey’adda IOM iyo urur Goboleedka IGAD, waxayna ka wada hadleen fulinta mashaariic lagu dhisayo xarumaha Wasaa radda. Mas’uuliyiinta 2 ada dhinac ayaa ka wa da arrinsaday hirgeli nta mashaariic lagu dayacti rayo xarumaha Wasaara dda Tamarta oo degaameysan doonta xar untii hore ee Wakaalada Biyaha Xamar ee Deg mada Wadajir.
Hey’ad da socdaalka Aduunka ee IOM ayaa Wasaaradda ka taageertay dhisma ha xarunta sheybaarka Biyaha iyo goobo kale, waxaana si gaar ah looga hadlay dhi smaha xarunta Wasaaradda, kaas oo dhowaan billaaban doona sida uu qorshuh u yahay.
Dhaqaalaha mashaariicdan ayaa wax aa bixinaya Bankiga horumarinta Afrika iyo Urur Goboleedka IGAD, iyadoo hay’a dda socdaalka Aduunka ee IOM ay fulinta ka Gacan siinayso Wasaaradda Tamarta iyo kheyraadka Biyaha ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya.
Kulanka waxaa goob joog ka ahaa, Wa siir ku-xigeenka Wasaaradda Cismaan Lib aax Ibraahim, qaar kamid ah Agaasimiyaa sha Wasaaradda iyo saraakiil ka kala soc tay hey’adda IOM iyo IGAD.
Ma jirto illaa hadda wax war ah oo ka soo baxay maamulka degmada Hodon iyo ciidamada ammaanka.
BADMAAXIIN TURKISH OO LAGU QAFAASH AY MEEL KA BAXSAN XEEBAHA DALKA NIGERIA
Toban Badmaaxiin Turkish ayaa waxaa Waaberigii hore ee shalayto laga qafaash ay Burcad-baddeed Hubeysan oo ku sug naa meel ka baxsan Xeebaha Nigeria.
Shirkadda leh Markabkaasi oo lagu ma gacaabo Kadiyoglu Denizcilik ayaa shee gtay inay Markabkaasi la socdeen Badm aax, iyadoo 10 la qafaashay, halka ay 8 kalenay si nabad ah u dul saaran yihiin Ma rkabka Xamuulka ee laga afduubtay Bad maaxinta.
Markabka Turkishka oo watay Calan ka Turkishka lagu magacaabo Paksoy 1, ayaa la sheegay in lagu weeraray Gacan ka Badda dalka Gini, xilli uu ka soo shir aacday dalka Kaamiruun, kuna sii jeeday dalka Ivory Coast, iyadoo uusan wax shixn ad xamuul saarnayn.
dhinaca kale, Afhayeenka Xisbiga ka taliya dalka Turkiga ee AK Party, Omar Ce lik waxa uu Suxufiyiinta ugu sheegay caa simadda dalkaasi inay Wasaaradda Arrim aha Dibedda iyo Hay’adda Sirdoonka si dhow ula socdaan xaalladda Afduubka, wuxuuna ku baaqay in la sii daayo Bad maaxiinta oo bad-qaba.
Faahfaahin kale lagama bixinin halka lala aaday Badmaaxiinta Turkish-ka, mana kala cadda ujeedada Burcad-baddeedaasi inuu ku salaysan yahay Madax-furasho iyo in kale.
NIN GANACSADE AHAA OO LAGU DILAY M/ MUQDISHO
Rag bastoolado ku hubeysnaa ayaa ma anta nin ganacsade ahaa waxay ku dileen Degmada Dharkiinley ee Gobolka Banaa dir, iyadoo dilka ka dibna ay u suurtaga shay in ay sharciga ka baxsadaan.
Dembiile-yaasha ayaa qaarka kore ee jirkiisa ka toogtay ganacsade Maxamed Cumar Calasow oo aad looga garanaayay Degmada Dharkiinley.
Raggan oo lala xiriirinayo Ururka Al Shabaab ayaa waxaa durbadiiba u suurta gashay in ay ka baxsadaan halkii ay ku dil een ninkaasi ganacsadaha.
Sida looga bartay Ciidamada Dowlad da Somaliya waxay goobtaasi gaareen, xi lli ay baxsadeen dhagar-qabayaasha, sidii caadada ahaydna waxay sameeyeen hawl gal ugu dambeen fashil ku soo dhamaad ay.
Ciidamada Booliska ayaa meydka ma rxuumka ka qaaday goobtaasi, iyagoona u qaaday dhinaca Xarunta Hay’adda Dembi Baarista CID, halkaasoo inta badan la gee yo dadka ay dilaan kuwa bastooladaha ku hubeysan.
M/Muqdisho ayaa waxaa joogto ka noq otay qaraxyada iyo dilalka qorsheysan ee ay ka fulinayan xubnaha sida dhow loola xiriirnayo mintidiinta Ururka Al Shabaab.
MADAXWEYNE WAARE OO MADAXTOOYADA KU QAABILAY XILDHIBAANO
Maxamed Cabdi Waare, Madaxweyna ha Maamulka Hirshabelle ayaa shalay Madaxtooyada Magaa lada Jowhar ku qaabi lay Xildhibaano ka tirs an Baarlamaanka Hirsh abelle. Kulankan ayaa waxaa goobjoog ka ah aa Madaxweyne Kuxigeenka Hirsabelle, Cali C/laahi Xuseen (Cali Guudlaawe), Gu doomiye Kuxigeenka 1aad ee Baarlama anka Hirshabelle, Cabdi Xuseen Geedi iyo Kuxigeenka 2aad, Canab Axmed Ciise.
Madaxweynaha oo gelinkii dambe ee Isn iintii dib ugu laabtay Magaalada Jowhar ay aa shalay kulan isugu yeeray Xildhibaan ada Hirshabelle qaarkood, si uu uga ware ysto buuqa toddobaadyo ka hor ku soo kordhay Maamulka Hirshabelle.
Kulankan waxaa uu ku soo beegmay aa, xilli dadku ay hadalhayan in Xildhibaa nada Baarlamaanka Hirshabelle ay wada an mooshin ka dhan ah Madaxweynaha Hirshabelle & Gudoomiyaha Baarlamaan ka. Madaxweyne Waare ayaa isu deyaaya in uu meesha ka saaro khilaafka kala qayb iyay Xildhibaanada, isagoo dadaal ugu jira inuu Xildhibaanada ku qanciyo in ay ka tanaasulan culeyska ay ku hayaan maam ulkiisa.
Golaha ammaanka ee Qaramada Mid oobay ayaa si aan horey looga baran uga hadlay qarixii Jimcihii toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Kismaayo.
Kullan ay yeesheen 15 ka xubnood ee golaha ammaanka ayaa looga dalbadan dhammaan dalalka caalamka, iya da oo la eegayo xilka ka saaran shuruuc da adduunka iyo qaraarada golaha amm aanka inay la shaqeeyaan xukuumadda Soomaaliya iyo hay'adaha kale ee arrinta ku shaqada leh.
Golaha ayaa hadal qoraal ah oo ka soo baxay ku dalbaday in loo baahan yahay in gacanta lagu soo dhigo dadkii qaaday, ku wii abaabulay, kuwii dhaqaalaha ku bixi yey iyo kuwii kafaala qaaday weerarka oo lagu qaaday hoteel ku yaalla Kismaayo.
Kooxda al-Shabaab ayaa sheegatay in ay abaabushay weerarka oo ay ku dhint een ku dhawaad soddon ruux oo ay ku jireen dad caan ah oo bulshada Soomaaliy eed ay qadariyaan. Balse warka golaha ammaanka ayaa ku soo aaddaya iyada maamulka Jubbaland uu sheegay qof ka imid raggii weerarka qaaday in gacanka la gu hayo, mase jirto warbixin looga hadlay baaritaannada weerarka wixii ka soo baxay.
AXMED MADOOBE OO CABASHO U GUD BIYEY QARAMADA MIDOOBAY
Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxam ed Islaam (Axmed Madoo be) ayaa shaaciyey in cab asho ku aadan doora shada maamulkaasi uu u gudbiyey Qara mada Midoobay.
Axmed Madoobe oo daraad kulan la qaa tay wakiilka Qaramada Midoobay ee Soo maaliya James Swan ayaa waxa ay ka wada hadleen arrimo dhowr ah.
Madaxweynaha oo la hadlay Warbaah inta ayaa sheegay inay isla garteen in ma amulkiisa loo madax banee yo qabashada do orash ada Jubbal and.
Bisha Augusto ee sanadkan ayaa loo ballansan yahay in doorashada ay ka dha cdo magaaladda Xeebeedka Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose.
Madaxweynihii hore ee Koonfdur Afrika Jacob Zuma ayaa sheegay inuu soo wac ay qof uusan gareyn isla markaasna ugu hanja bay inuu dilayo isaga iyo carruurtiisa kadib markii hortagay gud diga baaraya eedeymaha musuq maas uqa ee loo heysto. Xilli ay socotay dhageysiga ee deymaha loo heysta, waxaa uu Zuma she egay in kalkaaliyihiisi uu qabtay telefoonka oo lagu yiri "Waxaad u sheegtaa Zuma in aan dili doono isaga, carruurtiisa iyo dad ka ka agdhawba”
Garsoore Ray Zondo waxaa uu shee gay in aanan la aqbaleyn hanjabaad kasta oo ku saabsan dil iyo handadaad.
Guddiga garsooka ayaa baarayaa eedey mo musuq maasuq ee la sheegay inuu geystay xilligii uu awoodda hayay.
Jocob Zuma ayaa ka degey xilka mada xtinimada dalkiisa sanadkii 2018 iyadoo la gu eedeeyay in uu ku takri falay maamu lka musumaasuqna ku kacay.
Mr Zuma ayaa waxaa bedelay ku xige enkiisii Cyril Ramaphosa,oo ballanqaaday inuu wax ka qabanayo musuqmaasuqa isa goo ku tilmaamay sagaalkii sano ee uu xukunka hayay Mr Zuma waqti qasaaray.
Faahfaahin ka soo baxaysa qarax qasa are geystey oo ka dhacay Muqdisho
Waxaa soo baxaya faahfaahin ku saabsan qarax ay ku dhinteen 2 ruux saddex kalana ay ku dhaawacmeen oo ka dhacay degmada Hodon ee magaalada Muqdisho. Qaraxan ayaa la sheegayaa in uu ka dhacay laanta Sharikadda SOMTEL ku leedahay Isgoyska Black Sea iyadoo la ga maqlay inta badan magaalada Muqd isho.
Mid ka mid ah dadka ku dhintey qarax an ayaa la sheegay inuu ka mid ahaa shaqaalaha shirkadda Goobjoogayaal ay aa u sheegay Idaacadda Mustaqbal in mid ka mid ah labada qof ee dhintay uu ahaa shaqaalaha sharikadda, halka qofka kale na rayid ahaa. Qaraxa ayaa ka dhacay me el ay ciidam ada ku baaraan gaadiidka aa da dhinaca cirtoogte,halkaas oo ku dhow dhismaha SOMTEL ee BlackSea.
RA’ISUL-WASAARAHA ETHIOPIA OO FARRIIN U DIRAY AMIIRKA DALKA QATAR
wasiirka Maaliyadda ee dalka Ethiopia, Axmed Shide waxa uu dhambaal uu u soo dhiibay R/wasaare Abiy Ahmed Ali u gudb iyey Amiirka dalka Kuwayt, Sheekh Saba ax Al-axmed Al-jaabir Al-sabaax.
Wakaalladda Wararka Kuwayt ee KUNA ayaa sheegtay in Amiirka iyo Wasiirka Ma aliyadda Ethiopia kulan ku yeesheen Qasr iga Amiirka ee ku yaalla caasimadda dalka asi ee Kuawyt City.
Wakaalladu waxay kaloo sheegtay in Dhambaalka Abiy Ahmed uu diiradda saa rayey xiriirka 2da dal iyo qaababka loo sii xoojin karo. Abiy Ahmed waxa uu Dha mbaalk iisa ku gudbiyey Casuumaad uu u fidiyey Amiirka Kuwayt si uu booqasho rasmi ah ku tago Ethiopia.
KULAN LAGU TAAGEERAYAY DHISMA HA GALMUDUG MIDEYSAN OO MUQDISHO LAGU QABTAY
Kulankan oo ay ka qeybgaleen, siyaasiyiin, xildhibaanno hore, wa x-gaad iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa lagu bogaadiyay socdaalka ra'iisal wasaaraha xuuumad da Soomaaliya Xassan Cali Kheyre iyo dhismaha Galmudug mideysan.
War-murtiyeed kulanka laga soo saa ray islamarkaana nuqul ka mid ah la soo gaarsiiyay Hiiraan Online la soo gaar siiyay ayaa u dhignaa sidan :
Kulan M/Muqdisho ay yeesheen Culim aa’udiin, Odoyaasha Dhaqanka , Dhalinyaro, Siyaasiin , haween , Ururada Bulshada Rayidka ah iyo Ganacsato ayaa waxaa si buuxdo u taageerayaan Dadaaladadib u dhiska ah ee dowladda Federa alkaSoomaliya ay ka waddo Galmudug , kuwaas uu Hoggaamin ayo Ra’iisulwasaarahaXukuuamdda Soomaaliya Hassan Cali Khe yre
Dhammaan qeybaha kala duwan ee Bulshada soomaaliyeed ee shalay ku kulmay muqdisho waxa ay ku boorinayaan Xildhibaana da Galmudug ,Siyaasiinta Galmudug, Ganacsatada Galmudug, odo yaasha dhaqanka Galmudug , Haweeynka Galmudug, Dhalinyarada Galmudug iyo cid walba oo ka damqaneeysa kala qeeybsanaanta Galmudug in ay ku gacan siiyaan xukuumadda Soomaaliya dadaa lada lagu dhisayo "Galmudugmid ah”.
Haddaba si loo helo Galmudug ku dhisan sinnaan iyo caddaalad waxaan ku baaqeeynaa :In lagu garab siiyo dowladda Federaalka Soomaaliya dadaalada dib u heshiisiinta ah ee ay haatan ka waddo Galmudug, taas oo horseedi karta in la helo isku duubnida bulshada Galmudug.
2-In la mideeyo awoodaha dhaqaale iyo kuwa siyaasadeed ee lagu doonayo in dib u heshiisiin rasmi ah looga dhaliyo Galmudug, ann agoo bogaadinayna dada alada Ra’iisulwasaaraha Xukuuma dad Soomaaliya Xassan Cali Kheyre uu hadda ka wado Galmudug
3-Waxaanbogaadineynaa dadaalada Dowladda Federaalka Soomaaliya ee ku aadan sidii loo wada qancin lahaa bulshada wa da degta Galmudug taas oo muujineysain ay ka go’an tahay xuk uua mdda "Galmudugmid ah”.
4-Waxaan dalbaneynaa ; "Galmudug mid ah” loo siman yahay oo aan sadbursi ku dhisneeyn taasoo sal looga dhigo isu tanaasul hors eeda midnimo iyo wadajir waarta .
Dhalinyarada , Siyaasiyiinta , odoyaasha dhaqanka, Culuma’udi inka , Ganacsatada iyo dhammaan dadkii ka soo qeybgalay Kulan kan Muqdisho ka dhacay waxa ay ballan qaadayaan in Ra’iisul wasaaraha Xukuuamdda Soomaliya ay ku gacansiiyaan dib u dhiska Galmudug
2-Dhalinyarada Muqdisho waxa ay soo dhoweynayaan , aadna u bogaadinayaan kaalinta muuqata ee uu Ra’iisulwasaaraha siiyay dhalinyarada soomaaliyeed ee ku nool Galmudug
3-Ugu dambeeyn waxaan ugu baaqeeynaa dhammaan xildhib aanada , Siyaasiyiinta , Ganacsatada iyo Culimada ka soo jeedda Galmudug in la’taageero dadaalada Xukuumadda Soomaaliya ay ka waddo
Dowladda Sacuudiga ayaa ku adkeysa tay dalabkeeda ah in ganacsatada Somal iland ee doonaya inay xoolaha u dhoofiyaan dalkaas ay ruqsad kasoo qaa taan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Arrintan ayaa timid, kadib markii dhawaan la sii daayey Markab ka sharaacday Dekedda Berber oo ku xirtay magaalada Jidda, kaasi oo muddo la hayey kadib markii uu Sacuudiga tagay isaga oo ruqsad ka haysan dowladda Soo maaliya.
Sida la sheegay Markabkaasi ayaa lagu sii daayey wada-hadallo dhexmaray wakiillo ka socday dowladaha Soomaaliya iyo Suc uudiga, ganacsato u dhashay Somaliland iyo kuwa Sucuudiga ee Xoolaha la wareeg ayay.
Kulankaasi ayaa waxaa ka dhashay, islamarkaana dhinacdyadu ay isla garteen in Markabka laga dajiyo Xoolaha, islamar kaana haatan wixii ka dambeeya Sacuudiga aan la geyn Xoolo aan warqad caafimaad ka wadan dowladda dhexe ee Soomaaliya.
Sida ay ogaatay Caasimada Online, Ganac satada Somaliland iyo wakiillo Somaliland ugu lug lahaa kulankaas ayaa la sheegay in ay aqbaleen inkasta oo kulankii Golaha Was iirrada ee Somaliland aysa ku soo hadal qa adin heshiiska Markabkaas lagu siidaayay.
Dhawaan ayey aheyd markii Somaliland ay beenisay in Ra’iisul wasaare ku xigeenka So omaaliya Mahadi Maxamed Guuleed (Kha dar) uu sii daayey Markabkaasi.
Dallad ay ku mideysanyihiin Ganacsato Xoo laha ka dhoofisa Boosaaso ayaa iyaguna la sheegayaa in ay Ganacsatada Somaliland Shuruud uga dhigeen in ay warqad caaf imaad ka qaataan Boosaaso si xoolahooda loogu dhoofiyo Dalka Cumaan.
Dalka Cumaan ayaa bil kasta loo dhoofi yaan 10,000 (toban kun) oo Dibi kuwaas oo ka baxaDekadda Magaalada Boosaaso ee Gobolka Bari. Dalalka Sucuudiga, Yemen iyo Cum aan ayaa ah dalalka ugu badan ee Carbeed ee dhoofsada Xoolaha kala duwan ee laga qaado Xeebaha Soomaaliya.
EEDEYSANE LAGU TUHUNSAN YAHAY DILKII SAYNIS-YAHANAD U DHALATAY MARAYKANKA OO LA QABTAY
Boliska dalka Giriigga waxay sheegeen inay gacanta ku dhigeen Nin lagu tuhu nsan yahay Saynis-yahanad u dhalatay Maraykanka oo lagu magacaabi jirey Suz anne Eaton, taasi oo isbuucii hore lagu dilay Jesiiradda Kerete ee dalka Giriigga.
Eedeysanaha oo 27-jir ah ayaa ah Nin u dhashay Giriigga, kaasi oo ka soo jeeda Degmadda Kissamos oo 20-mayl u jirta Degmadda Janiya, halkaasi oo ay Saynis-yahanadda kaga qeyb galaysay Shirweyne.
Afhayeenka Boliska ee Jesiiradda Ker ete oo la hadlay Telefishinka ABC News ee Maraykanka ayaa sheepgay inay Eed eysanaha qabteen dhowr maalmood ka dib, markii ay Boliska baaritaano ku sam eeyeen Dheecaanka Hiddo-sidaha DNA-da oo laga qaaday Tobaneeyo qof oo ku nool goobta laga helay maydka Saynis-yahanadda. Ilo-wareed Boliska ayaa sheegay inuu Eeedeysanaha qirtay inuu geystay dilka asi, isagoo ku dhuftay gaarigiisa.
Caddaymo muuqda ayaa looga tegay halka lagu dilay Haweeneydaas oo ahaa dhismo ay Ciiddankii Naazigii Hitler ka dhi seen Jesiiradda Kerete ee dalka Giriigga sannadkii 1941-kii, si ay gabbaad uga dhi gtaan weeraradda Diyaaradaha Dagaalka.
CIIDAMO KA KALA SOCDA 13 WADDAN OO CARBIS MILLITERI UGA BILOWDAY ETHIOPIA
Kun Askari oo ka kala socda Toddobo dal oo ka tirsan Isbahaysiga NATO oo ay Maraykanka ka mid tahay iyo Shan Waddan oo ku yaalla Geeska Afrika oo ay Somali ka mid tahay ayaa waxa uu daraad Carbis Milliteri uga bilowday Bariga Ethiopia.
Carbiskaasi oo socon doono muddo 2 isbuuc ah ayaa waxaa looga dan leeyhaay in lagu xoojiyo Awoodda Hawlgalka Nabad-ilaalinta Afrika ka wadaan Somalia ee AMISOM. Dowladda Maraykanka ayaana maalgelinaysa Tababarka Wadajirka, iyadoo dalalka ka qeyb galaya ay ka mid yihiin Somlia, Jabuuti, Ugnada, Ethiopia, Ruwanda, Ethiopia iyo Hawlgalka AMISOM. Carbiskaasi oo loogu magac daray Dhoolatuska JA19 ayaa waxaa kaloo ka qeyb galaya Ciiddamo ka kala socda dalalka Maraykanka, Faransiiska, Jarmalka, Britain, Talyaaniga, Holland, Kanada iyo Braazil. Taliyaha Ciiddanka Maraykanka ee Africa, Jeneral Roger L. Cloutier ayaa sheegay in Carbiska diiradda lagu saari doono sidii loo xoojin lahaa Awoodaha Nabad-ilaalinta
ee Hawlgalka AMISOM.
WASIIR OOMAAR OO BOOQDAY DHAAWACYADA WEERARKII KISMAAYO
Wasiirka Wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista Hawada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Oomaar oo ku sugan Magaalada Kismaayo ayaa Isbitaalka ku booqday dadkii ku dhaawacmay weerarka Al-shabaab ku qaadeen Hotelka (Madiina Ex Cas-casey).
Wasiir Oomaar ayaa ku soo wareegay qeybaha kala duwan Isbitaalka weyn ee Magaalada Kismaayo,waxaana qaar kamid ah dadka dhaawacyada qaba uu gacan qaaday,isagoona ka xog wareestay Xaaladooda Caafimaad sida ay tahay. Wasiirka Wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista Hawada Maxamed Cabdullaahi Salaad Oomaar ayaa dadkii ku dhaawacmay weerarkii Hotelka Cas-caseey Alle uga baryay inuu Caafimaad deg deg ah siiyo,halka ku dhintay uu Alle uga baryay inuu Janada ka Waraabiyo. Si kastaba Jimcihii la soo dhaafay ayaa rag ka tirsan Al-shabaab waxaa ay weerar ku Bilowday qarax iyo mid toos ahaa ay ku qaadeen Hotelka (Madiina Ex Cas-casey),isla markaana waxaa weerarkaas ku dhintay dad ku dhow 30 Ruux,halka 56 kalena ay ku dhaawacmeen.
FAAH FAAHINNO KA SOO BAXAYA QARAX KA DHACAY G/ HIIRAAN
Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qarax xoogan oo saacadihii la soo dhaafay ka dhacay gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya. Qaraxa oo ahaa nuuaca Miinada dhulka lagu aaso ayaa la sheegay in lala eegtay ciidamo ka kuwa Itoobiya, xilli ay marayeen deegaanka Halgan ee gobolkaasi.
Al-Shabaab oo sheegtay masuuliyadda qaraxaasi ayaa tilmaamay inuu haleelay gaari Uuraal ah oo ay wateen ciidamadaasi. Sidoo kale waxa ay shaaciyeen in qaraxaasi ay waxyeelo dhimasho iyo dhaawac ay ku gaarsiyeen ugu yaraan 20 ka tirsanaa ciidamadaasi, sida ay hadalka u dhigeen. Illaa iyo hadda ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay taliska AMISOM iyo maamulka gobolka oo ku aadan qaraxaasi. Inta badan Al-Shabaab ayaa weeraro dhufo oo ka dhaqaaq ah ku qaada ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM, xilliyada ay isaga kala gooshayaan gobollada dalka.
Guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa xafiiskiisa kulan kula qaatay Pramila Patten oo ah u qeybsanaha gaarka ah ee xoghayaha guud ee Qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha la xiriira dhinaca dembiyada jinsiga, waxaana kulanka Sidoo kale ka qeyb galay Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Cabdiwali Sheekh Ibraahim Muudey.
Wasiirka Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Marwo; Fowzia Maxamed Sheekh, ayaa Xafiiskeeda ku qaabbishay Wafdi ka socda hey’adda IOM iyo urur Goboleedka IGAD, waxayna ka wada hadleen fulinta mashaariic lagu dhisayo xarumaha Wasaaradda.
KENYA OO GUBTAY GAARI AY KA BUUXAAN WALXAHA QARXA IYO RAGGII SAARNAA
Taliska Booliska Kenya ayaa sheegay in ciidamadooda ku sugan xaduuda ay la wadaagaan Soomaaliya ay dileen saddex ka tirsanaa Al-Shabaab oo watay gaari lagu soo buuxiyey waxyaabaha qarxa.
Sarkaal sare oo ka tirsan Booliska Kenya oo magaciisa ka gaabsaday ayaa u sheegay wakaalada wararka ee AP in qaraxa gaariga uu habeen hore fiidkii ka dhacay koonfurta Kiunga oo u dhow xaduuda Soomaaliya.
Wararka waxay sheegayaan in qaraxaasi ay ku dhaawacmeen labo sarkaal oo ka tirsan Booliska Kenya.
Waxa uu intaa ku daray in ay aaminsan yihiin in gaarigaasi ay qaraxa ku soo xireen ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya oo bartilmaameed ka dhigtay ciidamada amaanka Kenya.
Sidoo kale wuxuu sarkaalkan tilmaamay in ragaasi oo saarnaa gaari ay ka buuxaan waxyaabo qarxa ay ku dhuumaaleeysanayeen Keymo u dhow nawaaxiga deegaanka Kiunga, Booliskana ay ka war heleen, halkaasina uu gaarigoodii ku qarxay.
Al-Shabaab ayaa bilihii dambe kordhiyey weerarada ka dhanka ah ciidamada Kenya ee ku sugan xadka Soomaaliya.
DAWLAD DEEGAANKA SOOMAALIDA ITOOBIYA OO LABA BOQOL OO MASUUL LAGA ERYEY SHAQADII AY HAYEEN
Mas'uuliyiinta dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa qiimeyn lagu sameeyey waxa shaqadii laga eryey laba boqol oo masuul oo ah kuwo la soo magacaabo.
Mas'uuliyiintaasi labada boqol ah oo mid walba xafiiskii uu ka hawlgalayey lagu sameeyey qiimeyn ayaa mid waliba lagu helay eed u gaar ah, qaar musuqmasuq, qaar shaqo xumo, qaar maamul xumo, qaarna habsan shaqo iyo masuuliyiin kale oo khaladaad shaqo lagu helay.
Qiimeynta lagu sameeyo masuuliyiinta madaxdu soo magacowdo ee xilalka loo dhiibo ayaa guddi madax banaani ku samaysa qiimeyn ku saabsan masuuliyada ay dadka u hayaan, waxaana lagu kala saaraa shaqadii loo egmaday inay si fiican u guteen iyo in ay dayaceen.
Shaqo la eridu maaha markii ugu horeysay ee hore sidan oo kale waxay u dhacday laba jeer oo kala ah mar waxay ahayd wakhtigii Iid Daahir madaxweynaha ka ahaa 1996 oo la eryey illaa laba kun oo masuul oo shaqo xumo lagu eryey, marka labaad waxay ahayd xilligii Daa’uud oo isna qiimeyn uu sameeyey darteed lagu eryey illaa kun qof .
Nidaamkan qiimeynta ah waxa sameeyey Ra’isal wasaarihii hore ee Itoobiya Males Zanaawi, waxaanu ugu tallogalay dardargalinta shaqo iyo in masuuliyiinta xilalka haya la qiimeeyo oo uu shaqadda u qaranka u hayo lagu qiimeeyo qaabka uu u shaqeeyo.
Sidoo kale, waxa uu sameeyey nidaam adag oo shaqo, waxaana Itoobiya ku soo kordhiyey in qofkii laaluush bixiya iyo kii qaadaba muddo shan sanno oo xadhig ah uu mutaysto.
Waxaa ay Puntland u qabteen in mudo Saddex Cisho gudahood ay ay ciidam adooda uga saaraan deegaanka Bixin iyo deegaanada kale, iyaga oo ugu hanjabay inay tallaabo ka qaadi doonaan hadii aysan Puntland fulin weyso codsig-ooda.
Hadalkaan kasoo yeeray Saraak-iisha Ciidamada Soomaaliland ee Gobolka Sool ayaa imaaneysa xilli weli xiisad u dhaxeysa Puntland iyo Soomaaliland ay weli ka taagan tahay deegaano ka tirsan Bariga Gobolka Sool oo horay ay ugu wadadagaalamay.
Ciyaartoy hore oo dheeli jiray kubadda cagta una dhashay dalka Koonfur Afrika,Mark Bat chelor ayaa lagu toogtay meel u dhaw gurigiisa oo ku yaalla magaalada Johannesburg, sida ay sheegeen booliska dalkaas. "Waxaa lagu furay rasaas,waxaa laga toogtay daaqa dda, goobtii ayuu ku geeriyooday" waxaa sidaas yiri Col Lungelo Dlamini oo ah afahayeenka booliska xilli uu la hadlayay warbaahin kasoo baxda dalkaas. Wuxuu intaas ku daray in ilaa hadda aanan la ogeyn sababta ka dambeysay dilka loo geystay Mark Batchelor isla markaasna aysan jirin cid loo soo xiray dilkiisa oo lagu tuhmayo. Waxaa uu sidoo kale sheegay in booliska ay baarayaan dhacdadaas. Batchelor,ayaa waxaa uu dheeli jiray kooxaha kubadda cagta ee ugu waaweyn dalka Koonfur Afrika, waxaa geeridiisa ka naxay saaxibo badan. "Waxaa uu ahaan jiray ciyaaryahan ka shaqeyn jiray wanaajinta ciyaarta, waxaa uu ahaa mid doonayay inuu markasta gaaro guusha" sidaas waxaa yiri Steve Lekoelea oo ay kubadda cagta isla dheeli jireen.
XASAASI: PHILIPPE COUTINHO OO QAADAY TALAABO MUUJINAYSA IN UU KA SII SOCDO BARCELONA XAGAAGAN
Xiddiga kooxda Barcelona ee Philippe Coutinho ayaa u muuqda mid ku jira maalmihiisii ugu dambeeyay ee kooxdiisa Barcelona xilli ay jiraan warar sheegaya in uu ku soo laabanayo kooxda Liverpool inta lagu jiro suuqa kala iibsiga xagaagan.
Coutinho ayaa ku biiray Barcelona xagaagii 2018 isaga oo kaga biiray Liverpool kuna qaatay Camp Nou hal xilli ciyaareed iyo badh uuna ku soo bandhigin qaab ciyaareed fiican.Waxa maalmihii ugu dambeeyay soo baxayay warar sheegaya in uu xiddigu ku dhaw yahay ku laabashada kooxda Liverpool kadib markii ay PSG diiday in ay ka qayb dhigto heshiiska Neymar.
Wararka ayaa sheegaya in uu Coutinho ogolaaday in uu heshiis laba sano ah oo amaah ah ugu biiro Liverpool ka hor inta uuna 100 milyan si toos ah ug wareegin Reds.